Sakha ikusasa kwezemfundo
Intokozo ibibhalwe ebusweni kubafundi abenza ibanga leshumi abebebuthene ezinkundleni zemidlalo kwaGwabhu izolo lapho bebethole ithuba eliyingqayizivele ukuzobonela futhi bazifundele ngemisebenzi abangayifundela uma bephothula ibanga leshumi.
Umbukiso ubuhlelwe ihhovisi labantu abasha kuMasipala Umzumbe ubuhanjelwe othisha, abafundi kanye nezinhlaka ezivela ezikhungweni okubalwa iDurban University of Technology, Mangosuthu University of Technology, PC Training, University of KwaZulu-Natal, FET’S kanye neminyango kaHulumeni.
Ngesikhathi abafundi behamba bebuka imibukisa yezikhungo ezahlukahlukene bebelulekwa ukuthi bakhethe umkhakha wezobunjiniyela kwazise uyantuleka kakhulu eNingizimu Afrika. UMnumzane Philani Sokhulu ophuma eMgungundlovu FET wagqugquzela abafundi ukuthi bafunde kuma FET, “Kumele ningawabukeli phansi ama FET’s ngoba khona umfundi uphuma eseqeqesheke ngokwanele”.
Iningi labafundi abebengenalwazi ngemikhakha okumele bayithathe babonakala bekuthokozela ukuthola ithuba eliyingqayizivela lokucijwa ngoSolwazi abaphuma emakolishi, “Ngifisa ukwenza izifundo zobudokotela kepha bengingenalwazi ukuthi kumele ngiphase ngamalengiso kwizifundo zeSayensi kanye nezibalo ukuze isicelo sami siphumelele” kusho uSne Mkhize ofunda eNqolobane High School.
UMnumzane Philani Zama ophethe ihhovisi labantu abasha kuMasipala waseMzumbe ululeke ulusha ukuba balusebenzise ngobunono lelithuba ngoba liyimvela kancane ezindaweni zasemakhaya. “Thina amathuba anjengalawa besingawatholi sisafunda esikoleni samabanga aphansi, ubugcina usukhetha umkhakha ongawuthandi ngenxa yokungaluthola usizo kusanesikhathi.”